म अनलाइन इन्टरनेट बजार सेवा मार्फत चाँडै मेरो नौका बिक्री कसरी मा सजिलो बाटो कसरी कदम द्वारा मेरो डुङ्गा अनलाइन चरण बेच्न छ
उच्चतम मूल्य लागि आफ्नो नाउ बेचन गर्न कसरी
तपाईं सिक्न र कुनै पनि संभावित समस्या समाधान गर्न सक्छन् त डुङ्गा बजार मा जान्छ पहिले यो एक राम्रो विचार डुङ्गा सर्वेक्षण प्राप्त गर्न हो. तल वा topsides एक रंग काम गर्नुपर्छ भने, गर. तपाईं छिल्का painting हुनुहुन्छ भने, केवल सेतो वा गाढा-नीलो रंग प्रयोग. तथापि, एक दलाल इलेक्ट्रनिक अपग्रेड पैसा खर्च छैन recommends. तपाईं मात्र फिर्ता भनेर लगानी एउटा सानो अंश प्राप्त छौँ.
सही यो मूल्य. सही यो मूल्य. सही यो मूल्य.
लाइन मा जानुहोस् र इन्टरनेट साइटहरु सबै जाँच. Yachtworld, डुङ्गा व्यापारी, Boats.com आदि. आदि. तपाइँको सबै तुलना डुङ्गा प्रतिलिपि मुद्रण. कुल संख्या नोट. अरूलाई डुङ्गा वा छैन छन् कुनै पनि कुञ्जी सुविधाहरू नोट. साथै अन्य डुङ्गा इन्जिन घन्टा हेर्न, यो एक ट्रेलर छ गर्छ, तल रंग, आदि, आदि. यो सबै धेरै महत्वपूर्ण छ. तपाईं स्याउ गर्न स्याउ तुलना गर्न आवश्यक. (उदाहरण - तल चित्रित trailerable डुङ्गा कम लागि बेचन।) यो डुङ्गा सूचीबद्ध जहाँ स्थानहरु नोट. (उदाहरण - फ्लोरिडा डुङ्गा कम लागि बेचन - गर्मी, सूर्य, हावा, नुन र वर्ष गोल प्रयोग।)
तपाइँको तुलना छन् कि डुङ्गा छन् केही दलाल कल. तपाईं छन् जो तिनीहरूलाई बताएँ र तपाईं के छ. सबैभन्दा दलाल धेरै सहकारी हुनुपर्छ. तिनीहरूले सूचीबद्ध छन् डुङ्गा बेचे छैन किन तिनीहरूलाई सोध्न. तिनीहरूले यो आफ्नो डुङ्गा बेच्न लिन थियो के सोच्नुहुन्छ तिनीहरूलाई सोध्न. तिनीहरूले आफ्नो डुङ्गा लायक छ के सोच्नुहुन्छ तिनीहरूलाई सोध्न. तिनीहरूले यो व्यापार गर्न जा थिए भने तिनीहरू यसको लागि तपाईं दिनुहुन्छ के तिनीहरूलाई सोध्न.
यो मूल्य निर्धारण गाइड BUC र नाडा जाँच, तर तिनीहरूले भन्न के मा धेरै विश्वास छैन. यी अधिकांश, मेरो विचारमा, सम्पूर्ण अशुद्ध छन् तर तिनीहरूले बैंक मा आफ्नो डुङ्गा ऋण मूल्य बेस के-के हुन्. तिनीहरूले अझै पनि विचार गर्न केहि छन् अशुद्ध हुनत त्यसैले.
अब तल बस्न. तपाईं संकलन गर्नुभएको सबै डाटा हेर्नुहोस्. यो साँच्चै केही महिना को लागि आफ्नो डुङ्गा मा पकड गर्न लागत के गणना. आफैलाई संग इमानदार हुन! (नोट: के तपाईं आफ्नो जहाजमा योगदान यसको खुद्रा मूल्य संग गर्न केही छ।) आफ्नो नम्बर मा "हल्लीनु कोठा" दिइरहेको चिन्ता नगर्नुहोस्. तपाईं कोही होइन भन्छ भने "बातचीत गर्न कोठा" चिन्ता छैन हुनेछ. अब आफ्नो डुङ्गा मूल्य बेच्न अर्को एक हुन. म यो पीडादायी छ थाहा तर म कुनै पनि विक्रेता कहिल्यै वाह "मलाई बताउन सम्झना छैन, म सस्तो मेरो डुङ्गा बेचे!"
तपाईंको नाउ बेचन लागि शीर्ष दस सुझाव
1. बजार यो!: भारी विज्ञापन. स्थानीय नौकाविहार प्रेस मा ठाँउ विज्ञापन, ठूलो दैनिक अखबार र, यो खरीदारों हेर्न राज्य बाहिर यात्रा संभावना हुनेछ भन्ने ठूलो डुङ्गा वा सीमित उपलब्धता को एक भने, यो pricier क्षेत्रीय र राष्ट्रिय ठाउँ विज्ञापन ठाँउ. चित्र विज्ञापन अधिक यातायात आकर्षित. केही राजमार्ग-पक्ष धेरै मा किराए अन्तरिक्ष कहाँ राहगीरों-द्वारा सयौं आफ्नो driveway भन्दा यो-अधिक देख्न सक्छौं.
2. Fired-अप!: इन्जिन सुरु र एक आशा डुङ्गा हेर्न आउँछ अघि एक घण्टा यसलाई न्यानो. एक उत्कृष्ट लागि एक मरेको ब्याट्री वा balky सुरु-पनि बन्द खरीदारों इन्जिन-उत्तेजित गर्दछ.
3. निष्ठा को धरौटीको: लग महत्त्वपूर्ण छन्. स्प्रे-मा फर्नीचर मोम लागू र सखाप-बन्द छिटो र सजिलो सकिन्छ. यो gleam एक दिन भन्दा बढी पछिल्लो छैन, तर यो भन्छ र उहाँले एक घण्टा मा भन्दा हुनेछु भन्छन् गर्ने भनेर आशा लागि सिद्ध छ.
4. खाली प्रतिज्ञा: यो overflowing को इंगित गर्न तिनीहरूलाई मा कोच्नु सबै आफ्नो गियर छ उनि फेरि कति विशाल खाली stowage क्षेत्र र भन्नु देखाउन राम्रो हो. आफ्नो बकवास हटाउन.
5. टच बिन्दुहरू: एक व्यावसायिक विस्तार काम pristine अवस्थामा एक डुङ्गा लागि अर्थमा बनाउँछ. आफ्नो नाउ दर "औसत" वा "राम्रो" भने अधिक glaring blemishes मा केवल ध्यान. फिटिंग देखि आक्रान्त संयुक्त-बाहिर खियाले दाग, पुन टेप shredded बुट धारी, इन्जिन डे-चिल्लो, यो bilge सफा, आदि. यो सानो घर musty छ भने, surreptitiously हावा freshners ठाँउ.
6. Fogged-बाहिर: स्पष्ट पर्दे scratched वा उमेर द्वारा clouded छन् भने, सुरुमा हेर्नकालागि तिनीहरूलाई हटाउन.
7. तल अय्यूब: डुङ्गा तल छ भने चित्रित, एक ताजा कोट लागू. यो डुङ्गा नजर धोखेबाज बनाउँछ. पनि रंग थकित-बन्द छ कि रंग जहाज को बाहिर र कडी ड्राइव skegs स्प्रे.
8. समुद्र परीक्षण: हटाइयो कैनवास संग, सुरक्षा गियर तर सबै ईंन्धन र पानी मा किनारामा र प्रकाश stowed, आफ्नो नाउ इच्छा विमान सजिलो, अधिक nimbly ह्यान्डल, र छिटो शीर्ष-अन्त गति पाउन. सकेसम्म केहि गर्न सवारी-साथ मित्र र परिवारका सीमित गर्न खरीदार विश्वस्त प्रयास, माथिको कारण, र त डुङ्गा को साँचो "roominess" painfully स्पष्ट छैन.
9. कागज Chase: सबै शीर्षक छ, दर्ता, विस्तारित ग्यारेन्टी र, उपलब्ध भने, एक बांधन मा हात मा सेवा रेकर्ड. यो प्रभावशाली छ, यो गर्न खरीदार गरेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया ho-Hum देखिन्छ भने.
10. व्यावहारिक हुन: पहिलो खरीदार भेला अग्रिम राम्रो आफ्नो तल-लाइन मूल्य बाहिर आंकडा. विज्ञापनको डलर लागत विचार, भण्डारण र मर्मतका यो डुङ्गा देखाउने संलग्न समय लागत रूपमा राम्रो बिक्री को लागि हो, जबकि.
Takeaway: तीन अधिक सुझाव…
11. चुप चुप: डुङ्गा देखेको छैन जो कसैले फोन भन्दा आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मूल्य प्रकट नगर्नुहोस्. एक खरीदार आफ्नो डुङ्गा देख्नुहुन्छ अघि, उहाँले कुनै भावनात्मक लगानी मिल्यो गर्नुपर्छ. यसबाहेक, तपाईं उहाँले पनि यो खर्च गर्न सक्छन् थाह कसरी? प्लस, यो बार मा खरीदारों अक्सर मित्र तपाईं यात्रा गर्न प्रयास मा "नयाँ आशा" रूपमा कल छ.
12. तिरेको गर्नुहोस्: नगद राजा छ. चेक ठूलो-पटक हो तिनीहरूले खाली. तथाकथित "बैंक जाँच" सुन जस्तै राम्रो छैन. सबै यी खरीदार मुद्दा को मिति मा खाता मा चेक राशि छ कि "प्रमाणित गनु" छ के. तिनीहरूले व्यक्तिगत जाँच रद्द जस्तै सजिलै रद्द गर्न सकिन्छ. तपाईं खरीदार गरेको पैसा खर्च गर्न सक्छन् थाहा सम्म डुङ्गा भन्दा साइन छैन.
13. ठूलो प्रश्न: तपाईं बिक्री गर्दै किन खरीदारों invariably सोध्न. खैर, मूर्ख मुद्रा. तर तपाईं भन्न सक्दैन (वा tinkering आफ्नो थकित एक ग्यारेन्टी को लाभ बिना). जीवन शैली परिवर्तन सर्वोत्तम जवाफ हो. तपाईं cruising प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भन्न र खुला डुङ्गामा यो के गर्न सक्दैन, तपाईं एक स्की डुङ्गा आवश्यकता छैन त आफ्नो बच्चाहरु अब तपाईं संग जान छैन, एक downsize क्रम मा छ त तपाईं अब उप्रान्त अपतटीय माछा छैन, जे सुकै होस्.
निजी जेट चार्टर उडान सेवा बाट वा गर्न विल्मिङ्गटन, कांग्रेस